Date My Pet » 4 Simba Miitiro Of Happy Relationships
Wati atora nguva yokufungisisa pamusoro panzira maitiro ako maitiro kudzora rudo hwako nani kana kuti kuipa? Kune zvinhu zvaunoita mukusaziva kuti kunokanganisa ukama hwako nenzira yakanaka, zvakuine dzimwe purogiramu kuti akava chechipiri hunhu nava- kwamuri, asi kutyaira mudiwa wako nzungu. Nepo vokutanga ndivo kuchengetedza, ungafunga funga muchizadzwa kubvisa chechipiri mhando tsika uye kushandisa dzimwe tsika ukama hunofadza chete kubudirira kurichinja kuva tsika.
1. Bata mudiwa wako noruremekedzo
Ruremekedzo chinhu chirungiso chero ukama vanofanira, kana tiri kutaura pamusoro fling chesekondari, usiku mumwe anomira kana kufambidzana senyaya yokutamba nayo. Kurapa mudiwa wako noruremekedzo anova rainyanya kukosha kana muukama chakakura, kunyanya kana uchida kuzvitengesa kuroorana hwose nokusingagumi. Kuremekedza zvinotipa pakuratidza rudo, sezvinoita yokusaruramisira mudiwa wako noruremekedzo chaizvoizvo zvinoreva dzokunyora kusatendera yako, kwokushaya kwenyu chivimbo kana kugamuchirwa.
Kuremekedza mumwe wako kunoreva kuvaratidza munovada nokuda ndivanaani. Unogona kuva nemaonero akasiyana pane upenyu, asi izvi hazvirevi kuti iwe une kodzero vamuremekedze / her. Ichi chinhu unofanira kuyeukei kunyanya apo vaviri imi hadzibvumirani chinhu. kurwa, kunyange vasingakoshi ndivo, ndidzo nguva apo nemadzimai kazhinji kukanganwa vari chaizvoizvo chikwata uye vanofanira kuzvibata sezvo vakadaro.
2. Enda nokuti inofamba ruoko muruoko
Muitiro uyu achava mukuru kukanganisa manzwiro ako, utano hwako uyewo ukama hwako. Zviri mukana kuzochera muviri asati kana pashure ndakagara zuva pahofisi uye mukana kupedza imwe nguva yakanaka sezvo vaviri. uyewo Kufamba ruoko muruoko kunoita zvakanaka kukurukura sezvo inguva iwe ubudirire kuputsa vako mabasa epamba uye kuchenesa musoro wako pamwe chete.
3. Kupedza manheru pamwe kure TV
Uchiona TV kungava chimwe chezvinhu mukurumbira (kana kwete kupfuura zvose) kupembedza nguva basa, asi zvirokwazvo hazvirevi kukubatsira sezvo vaviri. The TV chaizvoizvo rataurazve zvose pfungwa, kuita somunhu kukurukurirana nechivharo. Ungaita sei zvichida anobatana mumwe pandaiona TV? Sei pamusoro kutendeukira kubva TV (kanenge nguva nenguva), uye kupedza imwe nguva yakanaka sezvo vaviri? Munogona kutaura pamusoro zuva rako, unogona snuggle pamusoro pasofa, yeuka zuva rako rokutanga kana ronga rinotevera pazororo. Chipi rinonyanya vaviri iwe unoenda.
4. Ita zvakanaka nhengo dzomuviri mumwe wako
Sei pamusoro pokudzosa kofi kuti murume wako ari mangwanani? Kana kudana mai vake kuti tikundikane uye kubika ake kufarira pauduku dhishi? Zvakadini kutenga nemusikana wako yake kufarira keke? Kana kunyange nani, kugocha izvozvo kwaari? Hazvina kunge chinhu chikuru. Small zvakanaka kasina manzwiro ako rudo uye ruremekedzo. Achisiya manotsi nokuti mumwe kana mameseji kutaura imi kumusuwa / her neapo vari tsika anogona nechirongwa nenzira yakanaka ukama hwako.
3 Zvikonzero kusamborerutsa Puppy Your On A Date First